Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > ရသဘဏ်တိုက်
အမျိုးသမီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မျှော်လင့်ချက်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာကြည့်ခြင်း	အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၁ နာရီ ၂၆ မိနစ်	ဂျိုးဆက်ဖ် ဘော	(စာအုပ်ဝေဖန်ချက်) ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် ညနေ ၅ နာရီထိုးပြီး မကြာမီ နောက်ပိုင်းတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်ခြံဝင်း တံခါးပေါက် အနီးတွင် လှုပ်ရှားမှုများ ချက်ချင်းဆိုသလို ဆက်တိုက် ...
ပီဒါဆင် ရေးတဲ့ ကရင့်အရေးစာအုပ် အမှားတပုံတပင်	ကြာသပတေးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၃၂ မိနစ်	မာ့က် ဖာမနာ (Mark Farmaner)	မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိ ကရင်လူမျိုးတို့၏ တော်လှန်ရေးအကြောင်း စာအုပ်များ အရေအတွက်ကား ပို၍ များပြားလာနေသည်။ သို့သော် မိုက် တာ့ကာ Mike Tucker ရေးသားသည့် 'ကင်းလှည့်ခရီးရှည်' The Long Patrol ...
ပြည်ထောင်စု ခရီးသည် ဦးရွှေအုန်း	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၀ မိနစ်	ကိုပေါက်	ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဒုတိယ ကျောင်းသားသပိတ် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အလယ်တန်း ကျောင်းသားအဖြစ် ပါဝင်လှုပ်ရှားရင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကထဲ စတင်ခြေချခဲ့သည့် ...
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သင့်မြတ်ရေး၏ ရုတ်ချည်း ပြောင်းလဲမှုများ	တနင်္လာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၁၇ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့မတိုး-နောက်မဆုတ် နိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့် ပဋိပက္ခ အသွင်ကူးပြောင်းမှု (နှင့်/သို့မဟုတ်) ပြေလည်စေရေး ကြိုးပမ်းမှုများတွင် ပထမလမ်းကြောင်း Track I နှင့် တတိယလမ်းကြောင်း ...
ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏အတွင်းပိုင်းအမြင်များ	ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၀၄ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	“မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ပဋိပက္ခအသွင်ပြောင်းရေး သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး အလားအလာများကို လမ်းကြောင်း ၁ နှင့်... နရသိန်တောရက ခံစားမှု	အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၀၉ နာရီ ၅၆ မိနစ်	စစ်ဝေး	ရဟန်းအတွက် ဝတ်အပ်ရာ နီစွေးစွေး သင်္ကန်းဆိုတာ မြန်မာပြည်က ...
ကျော့ကွင်း	ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၀၆ မိနစ်	ဆောင်းလူ	မာယာများမယ်မကြံနဲ့ ဒါဟာ … ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကို စိန်တူးဖို့ ထွက်နေတာ ...
ဒဏ်ရာသည်းတဲ့ အားနိယာမ	သောကြာနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၁၀ မိနစ်	စိုးနေလင်း	တချို့မသိသလို နေကြတုန်း အဖုံးလုံလုံ ပိတ်ပြီးသား အမှန်တရားတို့ အရောင်လွင့် ...
ဘဝ ခရီးလမ်း	အင်္ဂါနေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၀၆ မိနစ်	ဇာနည်မောင်	မာရသွန်ဆန်တဲ့ … ဘဝလမ်းပေါ်က ဘဝကြမ်းများ ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့ အလွန်ပင်ပန်း ...
အောင်းပူများတဲ့ ပန်းချီကား	တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၄၃ မိနစ်	စိုးနေလင်း အဲဒီလိုအရောင်ရင့်ရင့် မုသားများနဲ့ ကျင့်သားရ… နီးရာဓား ကိုသာ ကျီးကန်းတောင်းမှောက် ... « ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 1234567 8910 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 1 စုစုပေါင်း 27	ကြော်ငြာ
We have 96 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved